Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Azụmahịa na-atọ ụtọ na-eme na IMEX America
"Ịbịa ebe a na-enye m ohere nke ịnọ n'elu egwuregwu m na inwe ike ijere ndị ahịa m ozi nke ọma." Onye zụrụ Linda Lawson anabatara, sitere na Achieve Incentives & Meetings na Ohio, na-achịkọta uru azụmaahịa abụọ na-akpali akpali na-akwado mbipụta IMEX America kacha ọhụrụ, na-eme ugbu a na Las Vegas.
Ohere azụmahịa na-atọ ụtọ na-ewere ọnọdụ n'ala ihe ngosi IMEX America.
Otu onye sonyere na mmekọrịta ọ na-ewu kemgbe afọ 10 kwuru, ihe ngosi ahụ bụ ohere dị mma iji zute ihu na ihu wee bịanye aka na nkwekọrịta ahụ.
IMEX America na-ebili taa, Tọzdee, Nọvemba 11, na Mandalay Bay na Las Vegas, Nevada.
Ala ihe ngosi abụrụla ntọala maka na-akpali akpali azụmahịa ohere dị ka Andrew Swanston, Onye isi ahịa, ọgbakọ na ihe omume na ExCel London, na-akọwa: “Anyị nwere ọmarịcha ụbọchị ụnyaahụ. Onye ahịa anyị na-emekọ ihe karịrị afọ 10 họọrọ IMEX America dị ka ebe iji kwado ihe omume ndị nnọchi anya 6,000 maka otu ụlọ ọrụ ahụike mba ụwa na 2022 - ihe ngosi ahụ bụ ohere dị mma iji zute ihu na ihu wee bịanye aka na nkwekọrịta ahụ. ”
Site na "adịghị mma" gaa na mgbanwe
Isi okwu siri ike nke gbara ndị na-ege ntị ume ka ha bụrụ “ihe na-adịghị mma” malitere ọmụmụ ihe a na ihe nkiri ahụ. Na ndu dijitalụ: Àgwà ise ahụ iji nwee ihe ịga nke ọma na obi ụtọ n'ụwa na-agbanwe agbanwe, onye na-ere ahịa na-ere ahịa na onye na-ekwu okwu mkpali Erik Qualman kwuru maka otu mgbanwe siri bụrụ otu n'ime “ndị ike ọhụrụ,” ọkachasị n'ime afọ ole na ole gara aga. "Kwụsie ike n'ebe ị na-aga, ma na-agbanwe n'ụzọ gị," ka ọ dụrụ ọdụ. Onye guru dijitalụ ahụ kwukwara maka otu esi eme "data, ndọpụ uche na nkwụsịtụ" iji hazie atụmatụ dijitalụ maka ihe omume na-enye ezi ntinye aka: "Malite na ịmụmụ ọnụ ọchị. Chee echiche banyere ihe ga-eme ka onye ahịa gị nwee ọnụ ọchị wee si ebe ahụ laghachi azụ."
A tụlere itinye aka na mmemme ịnya ụgbọ ala site na ikpochapụ igwe mmadụ na Let's End Discrimination Discrimination, nnọkọ nke David Allison, onye nchoputa Valuegraphics, ihe ndekọ data izizi zuru ụwa ọnụ emebere iji nyere ndị otu aka ịkọ ma mebie omume site na iji ụkpụrụ anyị na-ekerịta. Ọ na-ekwu, sị: "Ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ mmadụ na-akọwa ihe ndị mmadụ bụ, mana ọ bụghị otu esi eme ha. N'akụkụ niile nke ụwa ụkpụrụ kachasị mma ndị mmadụ na-echekarị bụ ezinaụlọ, ihe, mmekọrịta, ọbụbụenyi na obodo. David kerịta otu esi enweta ụkpụrụ ndị a dị mkpa iji zie ozi ndị bụ isi.
A na-eme ya na Inspiration Hub, ebe obibi nke ihe ngosi ụlọ ihe nkiri, ọdịdị mmadụ - echiche atọ hụrụ ndị ọkachamara sitere na Dear World, Human Biography na TLC Lions na-eduzi mkparịta ụka otu banyere ịchọta ọdịdị mmadụ na mmetụta dị ike nke ịkọ akụkọ na-akpali akpali na itinye aka. “Ịkọ akụkọ anaghị eme ka anyị ghara ịbụ ndị ọkachamara, ọ na-eme ka anyị nwekwuo mmadụ. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkpọ ọmịiko dị ka nka dị oke egwu, ka anyị nwere ike ịmepụta ebe jikọtara ọnụ iji rụọ ọrụ, "Gian Power sitere na TLC Lions na-akọwa.
IMEX America na-eme ugbu a na Mandalay Bay ruo Nọvemba 11.